स्वीडिश बैंकिङ सिस्टम | Apg29
भाग पुस्तकको तीन द्वारा केवल कैश cashless षडयंत्र&#
को Riksbank आफ्नो कथित नगद को कम प्रयोग "तटस्थता" बावजुद, सबै समय काम गरिरहेको छ। Riksbank सालाना "स्वीडिश वित्तीय बजार" नामक रिपोर्ट प्रकाशित। यसलाई भुक्तानी तथ्याङ्कहरू समावेश छ। तपाईं यस्तो त्यहाँ स्वीडेन छन् कति एटीएम र क्रेडिट कार्ड टर्मिनलहरु रूपमा तथ्याङ्क विवरण पढ्न सक्नुहुन्छ।
निजी बैंकहरू ठूलो चार प्रभुत्व छन्। Nordea, Swedbank, SEB र Handelsbanken। बैंक मात्र बैंक नै भित्र प्रयोग गरिन्छ कि अलग डिजिटल मुद्रा छ। बैंक प्रत्येक अन्य केही हदसम्म पनि हो र एक खतरनाक Domino प्रभाव वित्तीय संकटहरूको गठन हुन सक्छ जो प्रत्येक अन्य जमानत समातेर। यो यस्तो बीमा कम्पनीहरु र ठूलो खुद्रा चेन बैंक को स्थिति प्राप्त अन्य अभिनेता लागि साधारण भएको छ। अन्तर्राष्ट्रीय, स्वीडेन बेसल III भनिन्छ बैंकिङ नियमहरु जोडिएको छ। यो मानक बैंकहरू 'वित्तीय स्थिरता आवश्यक छ। यो कोर प्रणाली बाहिर दुई दायित्व को हदसम्म हुन्छन् जो श्रेणी म र श्रेणी द्वितीय भनिन्छ "तहहरू", छन्। यो एकदम अप्रकट छ, तर यो पछि आफूलाई बैंकिङ प्रणालीमा थप डुबाउनु गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ गर्नेहरूका लागि सर्तहरू जान्न राम्रो।
को Riksbank र सामान्य परिषद सधैं संसद नजिक सम्बन्ध थियो। को Riksbank पनि एक कार्यकारी बोर्ड छ। को 1600s मा, स्वीडेन निजी बैंक थियो। पछि दिवालियापन राज्य खरिद गरियो Riksbank बैंक द्वारा सामना गर्यो। Riksbank कार्ल XIs शासनकालको अघि खर्चालु Regency समयमा आकार लियो। हाम्रो समय मा, शोषण लागि जिम्मेवार को बैंकहरू र Riksbank नगद प्रयोग गरेर सकेसम्म धेरै रोकन गरेर सम्पूर्ण स्वीडिश जनसंख्याको संरक्षकको अभिनय छ।
को Riksbank त्यसपछि बैंकनोट्स issuing मा एक एकाधिकार थियो। प्रारम्भिक 90 को दशक मा विनिमय दर भन्दा मुद्रास्फीति ध्यान केन्द्रित गर्न आर्थिक नीति थाले। पैसा Riksbank मात्र Riksbank मा rinns प्रबन्धन। ब्याज दर नियन्त्रण गर्न Riksbank गरेको मुख्य उपकरण अन्य बैंकहरू आषा सुट आउने भनेर रेपो दर परिवर्तन गर्न छ। वित्तीय अवस्था भनेर रेपो दर नकारात्मक छ त अनौठो हुन सक्छ। हुँदा र बैंकहरू निम्न डेनमार्क नगद लागि माग बढेको उत्पन्न छिमेकी मा रुचि हुन सक्छ।
को Riksbank आफ्नो कथित नगद को कम प्रयोग "तटस्थता" बावजुद, सबै समय काम गरिरहेको छ। Riksbank सालाना "स्वीडिश वित्तीय बजार" नामक रिपोर्ट प्रकाशित। यसलाई भुक्तानी तथ्याङ्कहरू समावेश छ। तपाईं यस्तो त्यहाँ स्वीडेन छन् कति एटीएम र क्रेडिट कार्ड टर्मिनलहरु रूपमा तथ्याङ्क विवरण पढ्न सक्नुहुन्छ। पनि बैंक भनिन्छ भुक्तानी अर्को रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ "स्वीडिश खुद्रा भुक्तानी बजार।"
स्वीडिश बैंकिङ सिस्टम को एक ठूलो भाग RIX हुन्छन्। को Riksbank गरेको RIX Sys-मन्दिर ठूलो भुक्तानी कारण हुनेछ सबै प्रमुख बैंकहरू बीच गर्न सकिन्छ। भुक्तानी अधिकांश प्रकार RIX मार्फत जाने यसलाई नगद, कार्ड, क्रेडिट, जमानत वा मुद्राहरू छ कि छैन भनेर। एक सानो अप्रकट सामान्यतया RIX "ऋण र प्राप्य conclusively नियमन द्वारा भुक्तानी settles" भनेर भन्नुभयो हुन। यसलाई डिजिटल नगद संग गर्न-लिखित सक्छ बिट RIX सम्झौता विरोधाभासपूर्ण। भुक्तानी एउटा महत्त्वपूर्ण प्रकार, पेंशन RIX मार्फत Riksbank मा ऋण खातामा सञ्चय छन्।
स्विडिश बैंकहरू एक मुट्ठी र केही विदेशी RIX मा खाता - प्रणाली। विदेशी सजिलै देखिने सिटीबैंक र मोर्गन Chase बीचमा। केही बैंकहरू JAK बैंक र Ecobank RIX जोडिएको छैन। RIX खाता छैन भनेर बैंकहरू अझै पनि प्रोक्सी द्वारा प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
राजकुमारी टंकशाला, ड्रागन क्रेडिट कार्ड र काला Knights प्रभु
टंकशाला नामको राजकुमारी पटक थियो। त्यो के सिक्का र बैंकनोट्स को रूप मा नगद एक विशाल धन हुन देख्यो मा बसे। तर प्रदर्शनमा धोका छन्। ठूलो ढेर, यो केही प्रतिशत को रूप मा मात्र सतह नगद शामिल थियो। को चमकदार सतह समयमा क्रेडिट कार्ड लाखौं conned। थुप्रोअगाडि को बीचमा, यो दुष्ट जादू द्वारा सिर्जना एक विशाल शून्य बस थियो। डिजिटल मुद्रा भनिन्छ शून्य प्राप्त कर ढेर यो वास्तवमा थियो भन्दा धेरै ठूलो हेर्न। थुप्रोअगाडि किनारा वरिपरि बैंकरहरुलाई भनिन्छ सानो फोहर वेताल ओइरिए। बित्तिकै कसैले तिनीहरूले hissed र आफ्नो तेज चुच्चा दाँत देखाए त एउटा सिक्का खोसी गर्ने प्रयास रूपमा। यो केवल पैसा खोसी गर्न ventured गर्ने bravest थियो।
खराब ड्रागन र आफ्नो क्रेडिट कार्ड cashless कालो नाइट सबै नगद लिन टाढा र राजकुमारी मार्न चाहन्थे। यस्तो पतंग र झूटा कर Mounds धेरै देशहरूमा अस्तित्व। एक पटक एक समय मा, कर Mounds लगभग विशेष नगद शामिल थिए। तर पछि ठूलो टाढा-टाढाका देश SamUSAmien देखि दुष्ट विजार्डहरू छोटो ड्रेगन, क्रेडिट कार्ड र कालो जादू को मद्दतले खाली सिर्जना यसलाई भयो के भयो। विजार्डहरू, सबै देशहरूमा बीचमा वरिपरि भटक क्रेडिट कार्ड र शून्य तिनीहरूलाई भर्नु द्वारा कर स्ट्याकहरूको जलाएर। सबैभन्दा खराब विजार्डहरू को तीन भाइ Mastro, Expresso र Dinero थिए।
तिनीहरूले तालिका आकारको कार्ड र राजकुमारी टंकशाला मार्न र ढेर देखि पूरै नगद हटाउन योजना वरिपरि बस्न रूपमा हामीलाई दुष्ट Knights केही परिचय गरौं। एक Riksbank नाम Knights को। आफ्नो काम गर्ने थाक बढ्छ र बढ्छ तापनि नगद नै रकम बारे मा राख्छ सुनिश्चित छ।
उहाँले एकदम राम्रो देश Finansien मा ज्ञात छ। हामी तपाईंलाई उहाँको बारेमा थप केहि बताउन कि थाहा छैन।
अर्को नाइट एफएसए नाम। बित्तिकै कसैले त लेकानेखुसीगर्छ Finansien उहाँले बाहिर धेरै दिनको लागि, त्यहाँ हुन्छ यो oblong देशमा शब्द robberies कहीं धेरै रूपमा उहाँले बाहिर सडकमा उही सन्देश उहाँले पूर्ण कर्कश आवाज नभएसम्म yells।
キ0"हामी नगद संप्रदाय बिस्तारै हटाउन पर्छ!"
अर्को नाइट गरेको वित्त संघ।
キ 1 "चोरी!, चोरी!" यो नाइट Yells।
जब कसैले Finansien कतै एकल सानो नगद पैसा चुरा यो हुन्छ।
キ2"हामी नगद भत्ता हटाउन भने, त्यहाँ चोर्न केही छ!", उहाँले निर्धक्क चिच्याउँछन्।
(वित्तीय Supervisory प्राधिकरण। यो अन्य दुई एजेन्सीहरू को विलय देखि 1991 मा सिर्जना गरिएको थियो वित्त मंत्रालय अन्तर्गत एक एजेन्सी छ। यसको मुख्य कार्य जमानत व्यापार र वित्तीय कम्पनीहरु निगरानी गर्न। द एफएसए पनि tasked छ छ "वित्तीय बजार मा उपभोक्ताहरु को स्थिति बलियो बनाउँछ।" सबै कुरा cashless हाम्रो टाउको माथि पूर्ण निर्णय ।)
Knights अर्को जोडी उस्तै भएको cashless समाज थोक विकास र स्वीडिश व्यापार मा propsar। पूर्व एक अनुसन्धान जग र उत्तरार्द्ध एक व्यापार संगठन छ। अब Knights यो तले-माथि कथा मा के हुनेछ निर्णय गरे। तिनीहरू केवल सँगै हिंडे र त्यो कराए र आफ्नो जीवन लागि बिन्ती गरे तापनि गरिब राजकुमारी टंकशाला को हृदय मा आफ्नो तरवार जोर। तिनीहरूले गुर्राने वाला र सम्पूर्ण देश को ड्रागन क्रेडिट कार्ड राजा crawling नभएकोले। को ड्रागन आफ्नो आगोको साथ सबै बिल अप जलाए
सास। को Knights थुप्रोअगाडि सबै सिक्का बन्द छानिएको र राजकुमारी र ताल मा ती फ्याँकिएको।
तिनीहरूले समस्या बिना ड्रागन एकल खानको मा राजकुमारी गरेको मृत शरीर निल्न सक्ने धेरै राम्रो थियो। तर के त्यो गल्ति गल्ति केही बिन्दुमा एक वा दुई सिक्का निल्छ थियो भने, सायद त्यो केही सिक्का सुरक्षा रूपमा लुगा मा सिलना थिए। को ड्रागन वास्तवमा सिक्का धेरै एलर्जी थियो। को Knights सट्टा ड्रागन उनको खाना दिने ताल मा राजकुमारी डम्प निर्णय किन थियो। को ड्रागन अब क्रेडिट कार्ड को आफ्नो आफ्नो विशाल ढेर मा lurking छ। जो कोहीले adversely तिनलाई राशि र वजन मा डकगरिएको भनेर एक ठूलो उच्च क्रेडिट कार्ड उहाँले बस सिकार pawing प्रभावित भने। कथा को अन्त्य।
त्यसपछि रोक्न बाहिर बोल्ने नगद हटाउन सन्दर्भमा र हामी भने लामो सक्छन् Sverge मा cashless प्रतिरोध द्वारा कम्तिमा ढिलाइ भएको कथा वास्तविकता बन्नेछ।
सबैभन्दा खराब हुन्छ भने, हामी पनि फोहर कथा सबै राम्रो समाप्त जसमा एक निरंतरता हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्।
कस्तो भने नगद संप्रदाय बिस्तारै गायब?
बारेमा एक हजार पैच जसले, उदाहरणका लागि, नगद एक अधिक महंगा कार किन्न ती बाहेक फरक धेरै हुन सक्छ हटाइएका छन्। तर दुवै 500 र 200 -kronors -sedlarna हटाउने वास्तविक समस्या सुरु भने। वस्त्र र खाना अझै पनि एकदम राम्रो काम गर्छ, तर केवल वास्तविक खरिद मामलामा। तर कसैले एक सय टुक्राहरू 25000 लागि स्कूटर किन्छ भने विक्रेता 250 बैंकनोट्स गणना गर्नुपर्छ। 200 थियो - क्रोनर बैंकनोट्स त्यहाँ हुनु हुनेछ, उहाँले अझै पनि छैन त्यसैले 125. गर्न गणना गर्न धेरै सुखी ग्राहक उहाँले गनिन्छ गर्दा उहाँलाई कुरा गर्न हुँदा उहाँले एकाग्रता अनुपलब्ध छ। केही समय पछि, त्यो नगद को ठूलो रकम स्वीकार गर्न इन्कार गर्न सक्छ। नगद विभिन्न संप्रदाय उपलब्ध किनभने यो सबैभन्दा व्यावहारिक तरिका हो।
को अधिकारीहरु सट्टा एक रचनात्मक तरिकामा समस्या सुलझाने को नगद हटाउन robberies दोष हरेक मौका लिइरहेका छन्। सार्वजनिक छैन सुन्नुहुन्छ। एक अध्ययन मात्र 12 प्रतिशत गर्ने एक हजार टुक्रा लाग्छ अनावश्यक छ, उदाहरणका लागि, भेटिएन। केही वर्ष पहिले यो यांगचोपिंग मा एक धेरै-publicized robberies थियो। यो केवल केही दिन यो पछि, एक हजार पैच हटाइएको थियो गर्न एफएसए प्रस्तावित भएको थियो। समयमा तपाईं त पनि पैच पाँच सय र एक सय ट्याग हटाउन गर्नुभयो।
एक नगद र वाहन बीच एक समानान्तर आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रक र कार निषेध थियो वाहन चोरी टाढा प्राप्त गर्न भने हुनेछ। मात्र साइकिल र मोपेड जो त्यसपछि सानो नगद संप्रदाय अनुरूप हुनेछ रहिरहन दिएको थियो। आदर्श, तपाईं पनि गायब गर्न मोपेड र साइकिल यो चाहन्छु। हामी यसलाई केही दबाइहरु र लागूपदार्थको प्रयोग चोर्न हुन्छ किनभने सायद तल कुनै पनि फार्मेसी राख्न गर्नुपर्छ? निरन्तर क्रम नगद हटाउन मा robberies दोष वास्तवमा शुद्ध बालक जस्तो गर्न सीमा छ।
100-Krona र कम पैसा बाँकी छ, यो सबै नगद लागि सिद्धान्त रन छ। (तपाईं अझै पनि त्यहाँ पैसा झिक्न सक्छ भने) त्यसपछि बैंक को एक आउटलेट मा प्रयास 50 मा 3,000 क्रोनर माग्दै - वा 20 टुक्रा। मार्गदर्शन गणना मा 150 टिप्पणीहरू बैंक मा रहन हुन तपाईं एक मिसिन अप गणना रूपमा बैंक कर्मचारी नगद को धेरै बाक्लो wads व्यवस्थापन गर्न लाग्छ वा खराब आंकडा मा गर्नुपर्छ? शायद 75 पचास या त टुक्रा। एटीएम बैंकनोट्स को संप्रदाय को निकासी आधारमा। एक सैद्धांतिक 50 चार्ज गर्न अनुमति हुन सकेन र यदि 20 ओभरल्याप गर्ने मिसिन मा नगद को बाक्लो wads हुनेछ। को लोड मिसिन मा पैसा को कुल मूल्य कम थियो र पैसा को मात्रा धेरै ठूलो र नगद transports लागि कम व्यवस्थित हुनेछ।
यो प्रस्ताव टिप्पणीहरू बिना 50 दिर्हाम मूल्य मात्र सिक्का गर्न भएको केही चौथाई मा छ। नगद लागि एक विस्तृत मार्जिन द्वारा पुग्न यो दुखाइ सीमा बाहिर सीमित थियो। बैंक र पाइने मिसिन मा withdrawals के थियो? यो त नगद मिसिन मा बाहिर सिक्का लिन सक्षम हुने एकदम असम्भाव्य। सिक्का रोल वा पुरानो स्लट मिसिन वा के जस्तै rattling शायद एटीएम सिक्का? शायद। समस्या के तपाईं मात्र नगद आँखा हटाउन भनेर सुझाव यस प्रकारको मा यो विचार छैन वा गर्छन् बरु छ।
यो तपाईं सँगैको समस्या संग सम्झौता मा पैसा झिक्न सट्टा गर्नुपर्छ भनेर राम्ररी चाहनुभएको। को पसलहरूमा सक्छन् पाठ्यक्रम पनि पैसा को तर सानो कुल मूल्य एक एकदम ठूलो शारीरिक मात्रा को त। नगद परिवहन एकदम अधिक महंगा र थप व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनेछ। पनि अब नगद को निकासी व्यापार मा खुदरा लागि हानि। यो सबै थाह छ टाढा छ। व्यक्तिगत म सिक्के बैंकनोट्स भन्दा अझ राम्रो र व्यावहारिक ठान्छन्। तर त्यहाँ सबै संप्रदाय को सिक्का हुनेछ। पनि उच्चतम।
यो अवस्थामा, त्यसैले पनि एटीएम बाहिर छ कि यो सजिलै बुझ्ने गरिन्छ। यसबाहेक, वास्तवमा पनि किनभने तिनीहरूले एक क्रेडिट बैंक मा प्रयोग गर्न कार्ड, र मार्ने गतिविधिहरु आवश्यक धेरै नकारात्मक कुरा uttagsutomaterna। व्यापार पनि कम र कम नगद प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ संभावना हुन सम्भावना छ। केही बैंकहरू मात्र बन्द सुरक्षित सुरक्षा प्रणाली मार्फत दिन बाहिर काउन्टर भन्दा 500-क्रोनर। यी बैंकहरू फेरि सानो टिप्पणीहरू जाने भनेर विश्वास गर्न अनुभवहीन छ।
को पाठ्यक्रम यो पनि केवल 20 टिप्पणीहरू र सिक्का सामना गर्न एक समयमा केही खाना खरीद द्वारा र सस्तो वा प्रयोग वस्त्र किन्न सम्भव हुनेछ। तर दुर्गम समस्या प्रत्येक महिना साना बिल सयौं को पकड कसरी प्राप्त गर्न उत्पन्न हुन्छ। बैंकहरू यी प्रदान भनेर सोच्न छैन। एक चरम आपतकालीन समाधान म बारेमा "किन्न" छ लाग्यो सिक्का सस्तो किन्न रोल
आवश्यक को भिन्न। सिक्का जस्तै फेयरग्राउन्ड्स रूपमा ठूलो परिमाणमा मा छन्। आर्केडहरू र व्यापारीहरु को सिक्का प्राप्त गर्न कसरी गर्छन्? कसरी काम गर्छ मलाई थाहा छैन तर यो थप मा छानबीन रोचक हुनेछ।
यसलाई नगद दुई सबै भन्दा ठूलो संप्रदाय छिन्न पर्याप्त छ, यो मिसिन मा शायद पनि पैसा बाँकी नगद ह्यान्डलिङ बैंकहरुमा सङ्कलन र शायद थकित छ। जसले नगद राख्न चाहन्छु ती लागि यो त अब मूल्यवर्ग निष्कासन सकेसम्म धेरै प्रतिरोध गर्न आउँछ। यसलाई गरेको छ एक पटक यो लगभग सम्पूर्ण नगद लागि संचालित छ।
क्रेडिट कार्ड र इतिहास अन्य modernities कस्तो भिन्नता छ?
फरक राज्य शक्ति वित्तीय कम्पनीहरु र पसलहरूमा बिस्तारै विकल्प बिना पूर्ण cashless समाज विकास जबरजस्ती छ। यो कि क्रेडिट कार्ड (र अन्य गैर-नगद वस्तुहरू) वा नगद बीच एक विकल्प एक सही हुनुपर्छ समाज रूपमा लामो बारेमा कहिल्यै छ। चुनाव केही हदसम्म किनभने बस एक निश्चित प्रतिरोध विकास गर्न छ रहिरहन्छ गर्न अझै पनि छ। कार छिटो,, सुविधाजनक सुरक्षित थप र सस्ता वर्ष मार्फत sleeker गरिएको छ। समय, किनभने मान्छे स्वतः किनेको थप कार। तर क्रेडिट कार्ड को मामला मा, यो हदसम्म तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न मान्छे प्राप्त गर्न एक स्वीकृति र क्रमिक जबरजस्ती संग coaxing बाध्य बारेमा।
प्राकृतिक इतिहास र प्राविधिक विकास एक उदाहरण फाइदाको को मानिसजातिको छ वा जिज्ञासा मूल सीमा टाढा उत्प्रेरित गर्छ। यो födosöket लागि ठाउँ यात्रा गर्न नयाँ शिकार आधार खोजी गर्ने स्टोन आयु मान्छे देखि दायरामा गर्न सक्नुहुन्छ। युद्ध र हतियार विकास मार्फत एक प्राकृतिक, अत्यधिक नकारात्मक एक albeit छ। तर kontantlösheten विकास संग कुनै प्राकृतिक छ। यो दुवै अस्वाभाविक छ
र नकारात्मक। यो एक perverse विकास मुख्य रूप लोभ र शक्ति दुरुपयोग गरेर संचालित छ। को cashless तर्क एक मौलिक त्रुटि प्राकृतिक विकास रूपमा चित्रण गर्ने kontantlöshet छ। कि kontantlöshet सोच्छ जो कोहीले शायद वर्ष सयौं गलत मा फलिफाप हुनेछ प्राकृतिक विकास हो। यो प्रणाली बरु वा लामो बाँच्न गर्नुपर्छ सक्नुहुन्छ जीव रूपमा mutated र atrophied जनावर तुलना गर्न सकिन्छ।
तपाईं चक्र हिंड्न, बस सवारी वा काम गर्न कार जान चयन गर्न सक्नुहुन्छ। कार लगभग एक सय वर्ष मा सार्वजनिक उपलब्ध भएको छ हुनत, त्यहाँ अझै पनि एक कार बिना हुन चाहने धेरै छन्। टेलिफोन, टेलिभिजन, रेडियो, इन्टरनेट, कम्प्युटर र यति मा त्यहि जान्छ। एक त प्रकाश बल्ब र बिजुली ओवन को प्रयोग नगर्न छैन यी बिल्कुल आवश्यक र प्राकृतिक विकास हो किनभने। तर पनि यो मामला मा, त्यहाँ अझै पनि जो चाहनुहुन्छ ती लागि वैकल्पिक रूपमा मोमबत्ती र stoves स्ट्रोक प्रयोग गर्न संभावना छ। यो निरर्थक र ड्राइव सबैलाई जबरजस्ती गर्न downright अनैतिक हुनेछ। तर क्रेडिट कार्ड को मामला मा एक escalating हेरफेर छ। केही kontantlöshet एक स्वस्थ र प्राकृतिक प्राविधिक विकास छ भन्ने संकेत गर्छ।
Vecka 9, söndag7mars 2021 kl. 04:06